Lukkuu fi Risaa - Storybooks Minnesota
Lukkuu fi Risaa Hen and Eagle La Gallina y el Águila
Yeroo tokko Lukkuu fi Risaan hiriyotaa turan. Simbroota kaanani waliin nagaan jiraata turan. Tokkoon isaanitu balali’u hindanda’an.
Yeroo tokko lafairratti beelatu ture. Risaan nyataa barbachuuf lafa dheera deemu qabdi. Dadhabdee gara mana deebite, “Kraan salphaan jiraachu maala”, jete Risaan.
Halkan garii booda lukkun yaada garii argate. Lukkuun tuni ballii hiriyoota iraa kufe guruu calqabdee. “Me balliiwan kan kankeyna gubbatti yaa hodhinu,” jette lukkuun. “Tari kuni balaali’udhaf nugargaara ta’a.”
Risaan hudhuu calqabde sababin isaas ishee qofatu lilmoo qaba. Ballii lama bareeda isaa tolfatee lukkuu gubbaa balali’uu calqabde. lukkuun lilmoo ergifatulle yeroom san hidhuu ifatte. Lilimee kapbordi gubbaa irratti dhiftee gara mana nytaa bilchessuu deemite.
Garu sibrrowan kun yeroo risaan balali’u argan jiru. Isaanis balli mataa isaani tolfachudhaf lukkuun akka lilimee isaanif ergisan gafatan. Yerooma sana simbirron bayeen samii irra balali’u calqaban.
Yeroo simbirroon dhumaa lilimee ergifate debistu, lukkuun achi hinjirtu turte. Ijoolen ishee lilme fudhaate ittin taphatee. Yeroo tapha isaani xummuran lilimee cirracha kessati gatani deeman.
Guyyaa galgala sanii, risaan nideebi’e. Balliiwan yeroo karaa deemitu bubuqa’aan cimsuuf lilimee gafatte. Lukkuun kapbordi gubba ilaalte. Mana nyaata ittiqophessan kessas ilaalte. Mana duubas ilaalte. Grau lililmee argachuu hindandenye.
Lukkuun guyyaa tokko nafkenni’ jettee risaa gafate. “Sana booda balli kee nitolfata, balalitee nyaata niargatta” jetteen. “Guyyaa tokko qofa,” jedhe risaan. “Yoo lilimee kiyyaa nafhinkennene, cicii kee tokkicha akka kafaltitti nakennita.”
Yeroo risaan barii sana dhufu, lukkuun yeroo cirrachaa qoottu argite garuu lilimee hinarganne. Yeroom sani risaan dafee gadi balali’ee cicii tokkicha fundahte. Fudhatee ittin figide. Guyyaa sanirra calqabe lukkuun yomillee, essumattu taanan lukkuun lilmee barbacha lafa qotti.
Akkumaa gaddisini risaa lafa irratti muldhateen, lukkuun ijoolee isheeti himiti. “Dafaati lafa qullaa kessa bahaa,” jettene. Isaanis akkan jedhan, “Nuti guyyaamiti. Nifiginna.”
Sagni xinno: Seenaa Wangaarii Matayi Noziibele fi rifeensa saddan Lukkuu fi Dhimillee Ilimo harre Sirba Sakiimaa Anaanis fi ogummaa Guyyan gara magaala deeme